I-Swirl: Ipulatifomu Yokumaketha Yeselula Ephakathi Kwabathengisi Abakhulu | Martech Zone
I-Swirl: Ipulatifomu Yokumaketha Yeselula Ephakathi Kwabathengisi Abakhulu
NgoMgqibelo, Novemba 2, 2013 NgoMgqibelo, Novemba 2, 2013 Douglas Karr
Jikelezisa I-In-Store Mobile Marketing Platform ™ yipulatifomu yokuqala yokuvumela abathengisi abakhulu ukuthi badale futhi bahambise okuqukethwe okwenzelwe wena nokunikezwa kubathengi ngokuya ngezindawo zabo ezithile ezitolo ezidayisa ngokomzimba. Ipulatifomu le-Swirl linikeza isisombululo sokuphela kokuphela sabathengisi ukuphatha imikhankaso esebenzayo exhumana namakhasimende abo ngamadivayisi wabo weselula noma yikuphi kusuka ezingeni lomakhelwane, kuze kufike endaweni ethile yesitolo.
NgoMeyi, uSwirl wethule uhlelo lokushayela indiza nabathengisi bezemfashini kuzwelonke kubandakanya u-Alex no-Ani, uKenneth Cole, noTimberland okukhombise ukuzibandakanya okuphezulu kwabathengi nokuguqulwa kokuthengisa, ngendlela engakaze ibonwe Amaphesenti angama-75 wesilinganiso sokuvulwa kohlelo lokusebenza.
Sibone imiphumela ethembisayo kakhulu evela kubashayeli bezindiza beSwirl ebesigijima ezitolo zethu ehlobo. Amakhasimende ayakwazisa ukuthola okunikezwayo okwenziwe kwaba ngokwakho okusesitolo; lena ngokusobala iyindlela enhle yokuthi sixhumane nomthengi wanamuhla okhulayo ngokwedijithali. Ngokusekelwe kulokho esikubonile kuze kube manje, sinethemba lokunwebisa ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokumaketha esitolo be-Swirl kwezinye izindawo zaseTimberland ngo-2014. URyan Shadrin, iphini likamongameli wezentengiso ne-e-commerce yeTimberland.
I-Swirl In-Store Mobile Marketing Platform ihlanganisa ukukhonjwa kwendawo encane noma yiluphi uhlelo lokusebenza lomthengisi ukuletha imiyalezo efanele, okuqukethwe nokunikezwa kubathengi - ngenkathi bethenga. Inikwe amandla yi-Bluetooth® Low Energy positioning beacon, i-Swirl ingakhomba indawo eqondile ye-shopper ngaphakathi kwesitolo, efana ne-baby aisle noma i-electronics department, ngesikhathi sangempela futhi ithumele imiyalezo efanelekile, okuqukethwe nokunikezwayo ukushayela ukuthengisa.
Ipulatifomu ye-Swirl ifaka phakathi
Ama-Beacon we-Swirl SecureCast ™ - Ama-beacon okubeka ngaphakathi, ahlinzekwa ngebhethri anamandla we-Bluetooth® Low Energy afaka ngemizuzu, asebenze kuwo womabili ama-smartphones e-Apple ne-Android, futhi aqinisekise ngokuzenzakalela indawo eqondile yomthengi okhethe ukungena kuhlelo lokusebenza lomthengisi. Amadivayisi we-SecureCast angalungiswa ukuthi ahambisane ngokuphelele, avuleke Ama-Apple iBeacons noma, kubathengisi abaphathelene nedatha nobumfihlo babathengi, bangavikelwa ngobuchwepheshe bokubethela nokuphathelene nobuchwepheshe bukaSwirl.
I-Swirl Mobile Client Software Development Kit (SDK) - Inika amandla abathengisi ukushumeka kalula ubuchwepheshe be-Swirl kuzinhlelo zabo zokusebenza ezinamabhizinisi, kufaka phakathi amandla okubandakanya abathengi ngokuqukethwe okubhekiswe kakhulu nokwenziwe ngokwasuselwa endaweni engaphakathi yangaphakathi njengoba kunqunywe yizibani ze-SecureCast. Okuhlangenwe nakho okufanayo okusesitolo kungaphinde kungezwe kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza lomshicileli ovela eceleni ukunweba ukufinyelela kwezithameli nokushayela ithrafikhi eyengeziwe yezinyawo ezitolo ezithengisa.
I-Swirl Marketing Console - Isethi ephelele yamathuluzi wokumaketha ozenzela wona wedwa wokuphathwa komkhankaso weselula esitolo kanye analytics, okuvumela abathengisi ukuthi bakhe kalula imizwa yesikhangiso esisebenza ngaphakathi eqala ngokuzenzakalela njengoba abathengi bethenga esitolo. Amaqembu wokumaketha angaqhuba kahle imikhankaso ezinkulungwaneni zezitolo ngezici ezakhelwe ngaphakathi ezokuphepha nezokuphathwa kokuhamba komsebenzi. Ikhonsoli esekwe emafini ibuye ifake phakathi amakhono aphethwe ukuphathwa kwamabhekhoni avumela umthengisi ukuphatha inethiwekhi yezinkulungwane zamadivayisi we-SecureCast ne-Apple iBeacon ngokusebenzisa i-interface eyodwa.
Jikelezisa INetworks, Inc yinkampani yezobuchwepheshe esiza abathengisi ukuthi basebenzise amandla eselula ukuheha nokuthonya abathengi ngenkathi bethenga ezitolo ezithengisa. Abathengisi abaphezulu abanjengoTimberland, uKenneth Cole, no-Alex no-Ani basebenzisa ipulatifomu yezentengiso yeselula yakwaSwirl nobuchwepheshe bendawo elinde ubunikazi obuningi ukukhulisa ithrafikhi yezitolo, ukubandakanyeka kwabathengi kanye nokuguqulwa kokuthengisa.
Tags: ama-beaconsesitoloukumaketha okusesitoloukumaketha okususelwa endawenitekutsengisaukumaketha okuthengiswayoswirl
Amasu angama-20 e-Ecommerce okwandisa ukuthengiswa kwamaholide